Xogahaya XSKK Saciid Faarax Oo 27 Sanno Kadib Dalka Dib Ugu Laabtay
Iyadoo ay soo badanayeen in ay dalka ku soo laabanayaan ciyaartoydii hore isboortiga Dalka ayaa waxaa Magaalada Muqdisho yimid Xoghayaha XSKk Saciid faarax Ducaale.
Xoghayaha XSKK Saciid Faarax Ducaale oo 27 sano kadib dalka dib ugu soo laabtay ayaa sheegay in uu dalka u yimid howlo shaqo ujeedkiisa ugu wayna uu yahay sidii uu ku qabsoomi lahaa Tababar loo furayo garsoorayaasha XSKK tababarkaas uu bixin doono qabiir ay u soo diri doonaan Xiriirka kubada kolayga afrika Bisha Marso ee sanadkan.
Ducaale ayaa sheegay in uu kulan la qaadan doono xubnaha xiriirka ee howsha dalka gudihiisa ka wada si uu wax oga ogaado howlaha iminka socda.
“waxaa intaa ii xigi doonaa in aan howlo hormarin kubada kolayga ka qabto inta aan halkan joogo howlahayga waxaa ka mid noqon doono in aan Dowladda kala hadlo sidii ay garab nooga siin lahady dayarticka garoonka Wiish iyo in la abuuro Mini Basket kubada kolagya oo iskuulada laga her geliyo si kooxaha ay u helaan ciyaatoy ” ayuu sheegay Xogahaye Ducaale .
Xoghayaha XSKK Saciid Faarax oo daawanayay kulan ka tirsan Horyaalka K/Kolayga wareegiisa hore ayaa tilmaamay in ay halkan jogaan ciyaartoy wanaagsan oo u baahan in la caawiyo si ay hor mar u sameeyaan ,waxuu intaa ku daray in uu aad ugu faraxsan yahay in uu soo gaaro garoonka Wiish ” halkan waa halkii aan ku soo barbaaray waxaa si gaar ah farxad iigu ah in uu maanta ku sugan yahay macalinkaygi wax isoo baray Qaasin dhagnaas . ayuu sii raaciyay saciid Faarx oo indhahiisa ay qiiro ka muuqatay.
Xogahayaha ayaa dhaka kale baaq u diray Bahwaynta kubada kolayga meel kasta ay dunida ka joogaan waxuuna baaqiisa ku sheegay in qof kasta waxuu awoodo uu ku caawiyo XSKK si loo hormariyo kubadda kolayag soomaaliyeed ayuu hadalkisia ku soo gabagbeeyay .
Dhanka kale kulan ciyaareedki shalay oo ay fooda isku dareen kooxah k/kolayga I.L.S iyo PLasma University ayaa ku soo idlaaday 67 -27 oo ay guushu ku raacday kooxda I.L.S oo sidaa kula wareegtay Hogaanka Horyaalka iyadoo hal kulan ka haray horyaalka kaasoo Maalinta Sabtida dhex mari doona Kooxaha Heegan iyo Dekedadaha .